Shariif Sheekh Axmed Madaxweynihii ee Soomaaliya ahna Guddoomiyaha Midowga Musharixiinta oo Warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa sheegay in aysan ka tanaasulin muujinta in dalka ay ka dhacdo Doorashada la qabto 4-tii sano mar.
Guddoomiye Shariif ayaa sheegay in aysan gorgortan ka galeyn qabsoomidda Doorashooyinka Soomaaliya oo Hogaamiyayaasha Dowladda Federaalka Waajib ku ah in ay qabtaan si ciddii ku guuleysato lagu garab istaago.
“Cid aan u wakiilanay oo nooga hadlayo Arrimaha Doorashooyinka oo aan Musharixiinta ahayn ma jirto, kama tanaasuleyno Doorashooyinka Dalka oo waa waajib in la qabto, sidoo kale waxaa naga go’an muujinta in la qabto, waxaana aragnaa in dalka aan lala rabin doorasho oo xukunka lagu heysto mid askari” Shariif Sheekh Axmed.
Shariif Sheekh Axmed ayaa su’aal ka keenay cidda bixineysa amarka ciidanka, maadaama Hogaamiyaha oo ah taliyaha guud uu muddo xileedkiisa sharciga ah dhammaaday 8-dii febaraayo 2021.
“Muddo xileedka Hogaamiyaha wuu dhammaaday, maadaama uu yahay Taliyaha guud ee Ciidanka yaa amraya oo toos u hoostagayaan? Haddii la siiyo amar qaldan waa dambi kale oo kordhay, waxayna ciidanku ku dhisan yihiin nidaam & sharci ka madax bannaan in ay faraha la galaan Siyaasadda” Sidaasi waxaa yiri Shariif Sheekh Axmed.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir oo xubin ka ah Midowga Musharixiinta ayaa ku baaqay In isu soo bax lagu qabto Magaalada Muqdisho 26-ka Febaraayo 2021.
Warsame ayaa sheegay in dibadbaxooda uu ka dhacayo Magaalada Muqdisho gaar ahaan Taalada Daljirka Daahsoon, isaga oo isku xiray qabsoomidda Doorashooyinka & in si nabadgalyo loo qabto bannaanbaxooda.
“Jimcaha soo socda 26-ka Febaraayo 2021 waxa aan dibadbax ku dhigeynaa Daljirka Daahsoon” Sidaasi waxaa yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Guddoomiyaha Xisbiga Wadajir, waxaana u baahan-nahay in meel la saaro wixii dhacay 19-kii Febaarayo waana dambi wayn oo dalkaan gelin kartay dagaal Sokeeye balse aan tanaasulnay” Sidaasi waxaa yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur.